तपाईंको वित्तीय यात्राको लागि एक अनुप्रयोग
यस अनुप्रयोगले तपाईंलाई तपाईंको वित्तीय यात्रामा नियन्त्रण दिन्छ। तपाईं एक निजीकृत कार्य योजना को सिर्जना गर्न वित्तीय शिक्षा, उपकरण, र संसाधनहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाइँको प्रगति ट्र्याक गर्न र तपाइँको लक्ष्यहरूमा पुग्नको लागि मनाउनुहोस्! MyMAF Mission Asset Fund द्वारा निर्मित छ, एक विश्वसनीय नाफामुखी र वित्तीय संस्था १०+ बर्ष समुदायको सेवा गर्दै।
तपाईलाई पैसाको बारेमा धेरै कुरा थाहा छ। तर हामी सबै कहिलेकाहीं स्टम्प्ड हुन्छौं। म कसरी मेरो क्रेडिट बनाउन वा मेरो पहिचान सुरक्षित गर्न सक्छु? १० मिनेटमा, तपाईले अर्को चरण लिनु पर्ने शिक्षा पाउनुहुनेछ। नयाँ रणनीतिहरू वा द गो अन द गो मा वित्तीय सल्लाहहरू सिकेर तपाईंको आफ्नै यात्रा चार्ट।
तपाइँ निम्न सहित शीर्षकहरूमा भिडियोहरूमा पूर्ण पहुँच प्राप्त गर्नुहुनेछ:
खाताहरू, ओभरड्राफ्ट, बचत, करहरू जाँच गर्दै
क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट स्कोर र रिपोर्टहरू
गाडी Loण, प्रीपेड कार्ड, Payday ansण
विद्यार्थी ansण, 9२ ns योजनाहरू
बीमा, सम्पत्ति योजना, लगानी, धितो
यसलाई कार्य योजनाको साथ बनाउनुहोस्
पैसा वा क्रेडिटको बारेमा सिक्नु एक चीज हो। तर परिवर्तन गर्नु वा लक्ष्य सेट गर्नु अर्को कुरा हो। सहयोगी संसाधन र उपकरणहरूको साथ यसलाई अनुसरण गर्न सजिलो छ। तपाइँ केवल तपाइँको लागि डिजाइन गरिएको एक सजीलो अनुसरण गर्न सकिने वित्तीय योजना सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
जब तपाईं एक एमएएफ ग्राहक हुनुहुन्छ, तपाईंले के हुँदैछ भनेर हेर्न मासिक विवरणहरूको लागि कुर्नु पर्दैन। यस अनुप्रयोगले तपाईंलाई तपाईंको प्रगति ट्र्याक गर्न, तपाईंको viewणहरू हेर्न, र भुक्तानी सम्झाउनीहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं अझै सम्म कुनै प्रोग्राममा सामिल हुनुभएको छैन भने, तपाईं हाम्रो निःशुल्क वित्तीय कार्यक्रमहरूको जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईंको वित्तीय लक्ष्यहरूमा कार्य गर्नको लागि डिजाइन गरिएको।
वित्तीय भिडियो र सुझावहरू
जाने मा जानका लागि २ 26 बिभिन्न विषयहरूमा भिडियो हेर्नुहोस् - र कसरी क्रेडिट सिर्जना गर्ने, बचत निर्माण गर्ने, र वित्तीय आपतकालिनको लागि तयारी गर्ने वित्तीय सुझावहरूको पहुँच गर्नुहोस्।
तपाईंको FICO® स्कोर हेर्नुहोस् तपाईंको आर्थिक यात्रामा तपाईं कता हुनुहुन्छ भनेर ट्र्याक राख्न। बुझ्नुहोस् कुन कारकहरूले तपाईंको स्कोरलाई असर गरिरहेका छन् र तपाईंको क्रेडिट ज्ञान बढाउनका लागि स्रोतहरू पहुँच गर्न।
एक निजीकृत वित्तीय योजना बनाउँनुहोस् र तपाईं तिनीहरूलाई पूरा गर्न मद्दत गर्न संसाधनहरू पहुँच गर्नुहोस्। तपाईंको प्रगति ट्र्याक गर्न र तपाईंको उपलब्धिहरू मनाउन अनुप्रयोगमा फर्कनुहोस्!
तपाईंको हालको र पछिल्लो loansण, भुक्तान ईतिहास, र तपाईंको प्रोग्रामको बारेमा विवरणहरू अवलोकन गर्नुहोस्। तपाईं अनुप्रयोग मार्फत तपाईंको प्रोग्रामको बारेमा अद्यावधिक र रिमाइन्डरहरू पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ।
अंग्रेजी र स्पेनिश
अंग्रेजी वा स्पेनिशमा अनुप्रयोग पहुँच गर्नुहोस् र जब तपाईं चाहानुहुन्छ दुई भाषाहरू बीच स्विच गर्नुहोस्! तपाईंको भाषा प्राथमिकताहरू परिवर्तन गर्न तपाईंको सेटिंग्समा जानुहोस्।
तपाईंको यात्रामा ट्र्याकमा रहनको लागि अनुप्रयोगबाट अपडेटहरू लिनुहोस्। तपाईलाई आर्थिक रूपमा सफल हुन मद्दत गर्न तपाई हामीबाट केवल केही सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
थप सुविधाहरू चाँडै आउँदैछन्
MyMAF हाल सीमित रिलीजमा छ, तर हामीसँग नयाँ सुविधाहरू छिटै आउँदैछन्! हाम्रो अर्को रिलीजमा, तपाईं निर्दिष्ट लक्ष्यहरू सेट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, बचत योजना बनाउने दिशा निर्देशन प्राप्त गर्नुहोस्, र ती लक्ष्यहरूतर्फ तपाईंको प्रगति ट्र्याक गर्न थप उपकरणहरू। तपाईलाई सहयोगी सल्लाह र अनुस्मारकहरूको साथ मार्गदर्शन गर्न भर्चुअल कोच पनि पाउनुहुनेछ।
प्रश्न वा प्रतिक्रिया?
MyMAF अनुप्रयोग हाल आफ्नो पहिलो रिलीजमा छ त्यसैले हामी तपाईंको प्रतिक्रिया सुन्न चाहन्छौं। हामीसँग तपाईंको विचारहरू, प्रश्नहरू, वा यदि तपाईं हामीलाई भविष्यका विमोचनहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्न चाहानुहुन्छ भने सम्पर्कमा रहनुहोस्!
हामीले प्रदान गर्ने FICO® स्कोर अन्य क्रेडिट स्कोर भन्दा फरक हुन सक्छ। FICO® स्कोर र शैक्षिक सामग्री तपाईंको व्यक्तिगत शैक्षिक समीक्षा उद्देश्यको लागि मात्र अभिप्रेत। Endणदाताहरूले FICO® स्कोर, अन्य क्रेडिट स्कोर र क्रेडिट निर्णयहरूमा अन्य जानकारी जस्तै विभिन्न इनपुटहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्। तपाईंको FICO® स्कोर सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएको क्रेडिट फाइल नियमित रूपमा अद्यावधिक हुन्छ, र तपाईंको FICO® स्कोरले तपाईंको क्रेडिट फाइलमा सबैभन्दा हालको डाटा प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन। तपाईंको क्रेडिट रिपोर्टको प्रतिलिपि अनुरोध गर्न कृपया यहाँ जानुहोस्: http://www.annualcreditreport.com
व्यक्ति र / वा संगठनले यस रिपोर्ट प्रदान गर्दछ र निष्पक्ष इसहाक "repairण मर्मत" संगठन होइनन् संघीय वा राज्य कानून अन्तर्गत परिभाषित गरीएको क्रेडिट मर्मत संगठन ऐन सहित।
FICO® स्कोर र "स्कोर लेन्डरहरू प्रयोग गर्नुहोस्" संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य देशहरूमा फेयर आइजाक कर्पोरेशनको रेजिष्टर्ड ट्रेडमार्क हुन्। फेयर इसहाक परामर्शदाता द्वारा जानकारी इनपुट को सत्यता ग्यारेन्टी छैन।